KuSingapore ndiko kwoitwa makwikwi eWTA Championships	Thursday, 09 May 2013 11:00	SINGAPORE yakahwina bvumo yekuitirwa mutambo weWTA Championships kwemakore mashanu kutanga gore rinotevera. Nyika iyi yekuSouth-East Asia yakakunda nyika dzakaita seChina neMexico idzo dzaida kuti mutambo uyu utambirwe kunyika kwadzo.
Al Zarooni opikisa mutongo	Thursday, 09 May 2013 10:58	NYANZVI yaitirena mabhiza emujaho kuchikwata cheGodolphin, Mahmood Al Zarooni, uyo akamiswa kuita basa iri kwemakore 8 nesangano reBritish Horseracing Authority mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa zvinodhaka kumabhiza, opikisa mutongo wakapihwa sangano iri.
Zim yakahwapura menduru 61	Thursday, 09 May 2013 10:57	naNyasha MutenaZIMBABWE yakatora menduru dzakawanda dzinosvika 61 apo yakakunda dzimwe nyika dzayaikwikwidzana nadzo mumakwikwi achangobva kuitwa muHarare eConfederation of Schools Sport Associations of Southern Africa (COSSASA).
Ligi resoftball rotsva	Thursday, 09 May 2013 10:55	neMunyori weKwayedzaLIGI remutambo weSoftball riri kutarisirwa kutanga svondo rino muHarare apo zvikwata zvinosvika 12, zvitanhatu zvevanhurume nezvitanhatu zvemadzimai, zvichange zvichibandana mumutambo wekupemberera kuvamba kweligi.
KuMash West kwoitwa sarudzo dzemaUnder 17	Thursday, 09 May 2013 10:53	neMunyori weKwayedzaVATAMBI venhabvu veboka reUnder-17 vekudunhu reMashonaland West vari kutarisirwa kusangana svondo rinotevera musi weMugovera apo pachange pachiitwa mitambo yekutsvaga vanopinda muchikwata ichi.
Nyakoko otarisirwa kukwikwidza kumujaho
Zvidzidzo zvekick-boxing zvoitwa Floyd oda kunorwira kuUK
Nyanzvi inotirena mabhiza emujaho yakabatwa nemhosva
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 5 of 510	Search	Sponsored Links